17 jir Soomaali ah oo doonaya in laga doorto Edmonton, Canada? | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News 17 jir Soomaali ah oo doonaya in laga doorto Edmonton, Canada?
17 jir Soomaali ah oo doonaya in laga doorto Edmonton, Canada?
Previous articleNorwey: hadaad ka yartahay 65 sano waxaad qaadan doonta Talaalka Astra Zeneca.
Next articleNorwey oo ka wel welsan in dadka soo galootiga ah ay qaadan waayan Talaalka Covid 19.